Oromo Voice Radio, April 30 and Simbertuu -
Oromo Voice Radio, April 30, 2016
Oduu fi Qophii Kaayyoo
Simbirtuu, Ebla 28, 2016
Simbirtuu: Oduu , qophii ADDAA fi IMALAA. Waa’ee Oromoota galaana Meditraaniyaa keessatti dhumaniifi FXG irratti keessummootni 5 waan beekan waa jedhaniiru.
1 thought on “Oromo Voice Radio, April 30 and Simbertuu”
Oduu simberetu iraa; Dinii akka tofetaatii itii fayaadaamaa jiru kessaa;
1. Bishaan Umaataa iraa dhabu; kanaf fallaa kane ta’u Ogessootaa bishaanii biroo bishaanii kessaa hojaataan umaanii akaa falla fiddaan cinqee qabuu qabaa, maliff “tax” kafalee wan aregatuf ittii daballaan amaalee mindaan kan kafalaaum “tax” umataatiin wan ta’eef cinqee qabuu qabaa. Medianis kana irratii hojaachu qaba.
2. Dubaretii gudedu ykn salphissuu; kun immoo dubaretootaa yoo cabessiinee irriis ni cabaa kan jedhu dha, kan akkaa tofetaa waranatii (“strategy of war”) ittii fayaadaamaa jiru, kanaf ummaanii lenjii warana qeyee qeyee issatii fudhatee dinaa off iraa ittisuu, dubaretoonii Oromo bayinaan hojii bassaassetumaa saba issaniitif boba’u qabu kanafiis lenjii issaaniif kenu.
3. Salphissuun amalaa dinaa wan ta’eef safuu dinaaf egguun hin barebaachissu dinaa salphisuun barbaachissaa dha, Saafuun kan hojaatuu oromof oromo giduutii wara safuu bekaan giduutii. Kan biraa dubaretiin tigreetiis Oromo kessa ni jiraachaa jireetii kana beekkuutt issan iraa jiraa.
Tofeetaa debii ta’aa jedheen, yoo garegaareef,